UAlfred Tennyson noPaul Verlaine. Amabinzana kunye nemibongo ekufuneka uyikhumbule. | Uncwadi lwangoku
IsiNgesi u-Alfred Tennyson kunye nomFrentshi uPaul Verlaine.
Isiqingatha se Agasti. Isiqingatha sehlabathi se zeholide kwaye esinye isiqingatha sisonqena nakwindlela yakhe yemihla ngemihla. Ubushushu, ubuvila, ukuzola, indalo, ulwandle, ilanga, iintaba, ngokuhlwa okude, ukuphuma kwelanga ... Indawo efanelekileyo intwana yemibongo. Kokulungileyo, kokulungileyo. Ukuziva nje ukuba yi-bug kwaye ujonge ngaphezulu. Ewe kutheni ungabheneli ku Iimbongi ezimbini ezinkulu zenkulungwane ye-XNUMX. Umntu oliNgesi nomFrentshi. Nkosi UAlfred Tennyson noPaul Verlaine. Masifunde kancinci kwaye sikhumbule ezinye zakhe amabinzana kunye namaqhekeza imibongo yakhe.
1 UAlfred Tennyson
1.1 Ukuhlawulwa kweBrigade yokuKhanya
1.2 Inenekazi likaShalott
2 UPaul Verlaine
2.2 Ndiphuphe ngawe ngokuhlwanje
Le mbongi yesiNgesi yokuzalwa nguSomersby 1809 ithathwa njengeyona inkulu kuncwadi kwaye ngokungathandabuzekiyo eyona nto ibalulekileyo yexesha lokoyisa.
Uyise, owayeyinzala kaKing Edward III waseNgilani, wamkhulisa ngendlela engqongqo kunye neyona yakudala. Ndifunda kwi College College, waseCambridge, apho wazibandakanya neqela loncwadi elaziwa njenge Abapostile. Esi yayisisiqalo somsebenzi wakhe wokubhala. Wabhala imibongo yakhe yokuqala ngo-1830, kodwa ke kamva yaba yeyakhe imisebenzi edunyiswa kakhulu njengaye Inenekazi likaShalott, Ukusweleka kuka-Arthur y Ulysses. Kwaye ngaphezu kwayo yonke kukho elegy yakhe KwiMemoriyam (Ngo-1850), ezinikele kumhlobo wakhe osenyongweni, uArthur Hallam, kunye nodumileyo Ukuhlawulwa kweBrigade yokuKhanya (1855). Usweleke e-1892.
Nangona okuninzi kuthathiwe, kusele okuninzi; kwaye nangona singekhoyo ngoku ukuba amandla ngeentsuku zakudala ahambisa umhlaba kunye nesibhakabhaka, siyintoni, siyiyo. Umsindo weentliziyo zobuqhawe, buthathaka lixesha kunye nesiphelo, kodwa womelele ekuzimiseleni, ukuzama, ukufuna, ukufumana nokunganikezeli.
Kungcono ukuthanda kunye nokulahleka kunokuba ungazange uthande.
Amaphupha ayinyani ngelixa zihlala, kodwa yintoni ephilayo kodwa ephuphayo?
Ayisoze yaphela ixesha ukujonga umhlaba ongcono kunye omtsha, ukuba sibeka isibindi kunye nethemba kumzamo
Ubuxoki obuphantse buyinyani bubi ngaphezu kwabo bonke ubuxoki.
Ukonwaba akubandakanyi ekufezekiseni iinjongo zethu, kodwa kukulinganisa into esiyenzayo.
Ukuhlawulwa kweBrigade yokuKhanya
"Phambili, Khanya Brigade!"
"Charge imipu!" Watsho.
ngamakhulu amathandathu akhwele.
Ngaba umntu othile wafa isiqaqa?
Hayi, nokuba amajoni ebesazi
yayibububhanxa ke obo.
Babengekho apho ukuba baqiqe.
Babekhona kuphela ukuze baphumelele okanye bafe.
Kunxweme lomlambo, ulele,
amasimi amakhulu ebhali nerye
banxiba iinduli, balifumana izulu.
Kwintsimi, umendo uhamba
ukuya kwiinqaba eziliwaka zeCamelot;
Kwaye phezulu naphantsi, abantu beza
ujonge apho iinyibiba zidubula khona,
Kwisiqithi esibonakala emazantsi:
Umngcunube uyangcangcazela, umngcunube uyaqaqamba,
Iimpepho ezingwevu ziyashukumisa umoya
kunye nomtshangatshangiso, ohlala ugcwalisa umjelo,
ngasemlanjeni nakwisiqithi esikude
ukuhamba kuhamba, ukuya kwiCamelot.
Iindonga ezine ezingwevu: iinqaba zayo ezingwevu
balawula isithuba phakathi kweentyatyambo,
kwaye cwaka kwesi siqithi uyafihla
Wazalelwa eMetz kwi 1844 kwaye wafunda eLycée Bonaparte eParis. Ukhuthazwe ngu Baudelaire, Waziwa ngeencwadi zakhe zokuqala zemibongo, Imibongo yangeSabatha, ukususela ngo-1866, Amaqela amdaka, ukususela ngo-1869 no Ingoma elungileyo, Kodwa ubomi bakhe bungasasebenzi, iingxaki zakhe alcohol kwaye kakhulu ubudlelwane obunomsindo ndithanda naye imbongi UArthur Rimbaud bamsa kuye intolongo. Nje ukuba akhululwe, wapapasha Ubulumko, ingqokelela yemibongo yenkolo. Ngo-1894 wanyulwa eParis INkosana yeembongi. Wafa apho ngo-1896.
Umculo kuqala, uhlala ungumculo!
Kwaye ukholo lwam lunzulu kakhulu kwaye unenzondelelo enkulu kum, kangangokuba kuyo yonke into ndiyakholelwa ukuba ndiphilela wena kuphela.
Iinyembezi ziwa entliziyweni ngathi yimvula elalini.
Khala ngaphandle kwesizathu kule ntliziyo ityhafileyo Yintoni! Akukho kungcatshwa? Le duwa ngaphandle kwesizathu.
Vula umphefumlo wakho nendlebe yakho kwisandi se-mandolin yam: Ndikwenzele le ngoma ikhohlakeleyo necengayo.
Esona sililo sevayolin yasekwindla sinjengelonda emphefumlweni wentlungu engaqhelekanga engapheliyo.
Sithandwa sam, yiba nencasa, uswiti ...
Zolile kancinci, oh umlilo, umkhuhlane wakho onamandla;
isithandwa, ngamanye amaxesha, kufuneka sibe neyure esulungekileyo
Yiba buthathaka, phatha ngesandla sakho sothando;
Ndikhetha ispasm seyure enobundlobongela
ukuncwina kunye nokukhanya okuqaqambileyo
nomlomo okwaziyo ukundiphuza nokuba uyaxoka kum. (…)
Ndiphuphe ngawe ngokuhlwanje
Ukhe waf ’isiqaqa ngeendlela eziliwaka
Kwaye wambombozela izinto ezininzi kangaka ...
Kwaye mna, njengokuba ungcamla isiqhamo
Ndikuphuze ngawo wonke umlomo wam
Kancinci kuyo yonke indawo, intaba, intlambo, ithafa.
Ukusuka kumthombo oncomekayo ngokwenyani:
UThixo ... yintoni impefumlo kwaye yintoni esinqeni! (…)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UAlfred Tennyson noPaul Verlaine. Amabinzana kunye nemibongo ekufuneka uyikhumbule.
Aba ngababhali abahlawulwa kakhulu kwihlabathi